Shiinaha Soosaarayaasha Soo Bandhigida Alaabada Taxanaha KZJ iyo alaableyda | KAIQUAN
Dhismaha iyo kuleylka
Soo Bandhigida Alaabada Taxanaha ah ee KZJ
Codsiyada Ku habboon:
Bambooyin taxane ah oo KZJ ah, bambooyin slurry slurry taxane ah oo hal-marxalad ah, waa nooc cusub cusub & bambooyin slurry u adkaysta daxalka ay soo saartay shirkadeena Shijiazhuang. Iyadoo baahida loo qabo bambooyin qulqulaya ay ku sii kordhayaan awoodda korantada, metallurgy, injineernimada kiimikada, qalabka dhismaha.
KZJ bambooyin slurry taxane ah, hal-marxalad bambooyin slurry centrifugal nooc-keliya, waa nooc cusub & bambooyin slurry u adkaysta wasakhda soo saaray our Shijiazhuang shirkadda. Iyadoo baahida loo qabo bambooyin qulqulaya ay sii kordhayaan korontada, metallurgy, injineernimada kiimikada, qalabka dhismaha, iyo warshadaha kale ee aasaasiga ah bamka tixgelinta xaaladaha adag iyo xaaladaha gaarka ah ee hawlgalka codsiyada la soo saaray. Shirkaddu waxay ku soo qaadatay faa'iidooyinka horumarsan tikniyoolajiyadda iyo guulaha laga gaadhay gudaha iyo dibaddaba markii la samaynayay haydarooliga moodooyinka iyo qaabdhismeedka iyo xulashada walxaha u adkeysiga u adkeysiga taxanaha bambooyinkan.
Intaa waxaa dheer, Kaiquan ayaa ku daray hal abuur gaar ah oo u gaar ah muuqaalada naqshadeynta tan taxane ah. Bambooyinku waxay leeyihiin Faa'iidooyinka ahaanshaha sare hufan, oo leh tamar xoog leh awoodda badbaadinta, gariirka yar, buuq hoose, hawlgal lagu kalsoonaan karo, cimri dheer iyo fudeyd dayactirka. Bambooyin ' waxqabadka wuxuu gaaraa gudaha heerka hogaaminta, iyo waxtarka tusmada inta badan bambooyinku gaadho heer caalami heer. Caddaymaha alaabta waafaqsan yihiin Heerarka JB / T8096-1998 ee bambooyin qulqulaya Centrifugal.
Hore: Soo Bandhigida Waxsoosaarka Saldhigga Gawaarida ee WQ / YT
Xiga: Taxanaha KZJXL Bambooyin Soosaara oo Quusin
Mashiinka Biyaha la Dagaalama Diesel
Bambooyin lagula diriro Dabka Diesel Marine
Mashiinka Naaska lagu shubo ee Nidaamka la Dagaalanka Dabka
Dabka La Dagaalanka Bamka Biyaha Naaftada
XBD Taxanaha Double nuugista Dab-damiska
XBD-DP Taxanaha Bamka Dab-demiska
XBD Mashiinka Dabka Marxaladda Hal Mar
Soo Bandhigida Alaabada Taxanaha KQTL
W Seeries Waa Lagu Cadaadiyay Qalabka Cadaadiska
Mashiinka Dab-demiska Diesel